Momba anay - Shaoxing Jianye Outdoor Products Co., Ltd.
SHAOXING JIANYE OUTDOOR PRODUCTS CO, LTD dia naorina tamin'ny 2006 miaraka amin'ny orinasa miorina ao Shangyu, Shaoxing, faritanin'i Zhejiang, akaikin'ny seranan-tsambo Ningbo mandritra ny adiny 1, manampahaizana manokana amin'ny famokarana latabatra famolavolana plastika fametahana, seza mamoritra plastika seza plastika mametaka, ny ations manokana dia avy amin'ny 4FT 5FT. 6FT ka hatramin'ny 8FT ho an'ny mahitsizoro, ary Dia 27IN, 31 IN, 44IN, 5FT, 6FT ho an'ny boribory. Misy modely vaovao eo an-dàlam-pamolavolana.
Ary satria afaka aforitra mora ny fivezivezena sy ny fitehirizana toerana ho an'ny fametrahana, ireo vokatra ireo dia natao hamaly ny fepetra takiana manokana amin'ny indostrian'ny mpikarama amin'ny hetsika, ny foibe fanaovana fiaraha-misakafo sy ny fihaonambe, trano fandraisam-bahiny, klioba, efitrano fanaovana seminera ary ivon-toeram-piofanana, sns.
Nandritra ny fivoarana efa ho folo taona, Hongye dia manana milina famolavolana am-polony amin'ny habe samihafa izay lehibe indrindra dia 23000 grama. Mamokatra sy mivarotra vokatra plastika maherin'ny 40 amin'ny marika Hongye izy. Manana patanty manokana any Sina koa izahay ary mankafy tsena tsara manerantany. Manondrana any amin'ny faritra maherin'ny 70 sy faritra misy an'i Azia, Eropa, Amerika atsimo, Moyen Orient, Afrika, Russia Hongkong Taiwan sns koa i Hongye dia manome zahana loko isan-karazany. fepetra arahana. volavola sy filan'ny tsirairay: Hongye dia hampivelatra sy hanosika endrika vaovao isan-taona hamaly ny fangatahan'ny mpanjifa. Ny vokatray dia nandalo ny IS09001: rafitra fanamarinana kalitao 2008.
Ny orinasa dia manaraka ny "kalitao, ny marina ary ny trosa voalohany amin'ny filozofian'ny orinasa," ny orinasa dia mivoatra, ny mpiasa dia mitombo "toy ny kolotsaina eo amin'ny orinasa, ary mampivelatra ny" fanoloran-tena, ny fifandraisana amin'ny zava-baovao, ny fanahy miasa mafy raha toa ny fanavaozana mitohy sy ny fanavaozana ataon'ny orinasa, mandray anjara mavitrika amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena sy ny fiaraha-miasa ary ezaho hihazona ny lohany.